Hoggantoonni Itoophiyaafi Ertiraa Abu-Daabiitti badhaasa guddicha biyyatti badhaafaman - BBC News Afaan Oromoo
Hoggantoonni Itoophiyaafi Ertiraa Abu-Daabiitti badhaasa guddicha biyyatti badhaafaman
Image copyright Fitsum Araggaa
Ilmi Mootii Yuunaayitid Arab Emireet (UAE) Sheek Mohaammad biin Zaayiid MM Dr Abiyyii Ahimadiifi Pirezidaanti Isaayaas badhaasa biyyattii guddicha badhaasaniiru.,
Badhaasi kun Abu Daabiitti kan raawwateefi hooggansa isaan waraana dhaabuun gara nagaa buusuutti dhufanif 'meedaala pirezidaantummaa Zaayiid' badhaasaniiru.
Haa ta'uutii hariiroon Yunaayitid Arab Emireet (UAE) biyyoota gaanfa Afrikaa wajjin qabduufi dhiibbaan biyyoota galoo-galaanaa naannichaa irratti qabdu akkam ture? Amma maalirra jira?
Yunaayitid Arab Emireet waggoota darbanitti imaammata hajaa alaa haaraa baasuunishee hariiroo biyyoota wajjin qabduu isa duraa irra geeddaree jira jedhu, xiinxalaan siyaas-diinagdee lammii Ertiraa kan tahan Abduraahmaan Sayiid.
Itoophiyaafi Eertiraan waliigaltee nageenyaa mallatteessan
Ertiraa: 'Al-Shabaab deeggaruu ishii ragaan hin argamne'
Kunis biyyi kun isa dura walaba tahuun biyyoota daldalaaf qofa qunnamtu, dhiyeenya kana garuu Galoo-galaana naannichaatti nageenyaafi siyaasaa keessa seenuuf yaalaa jirtii jedhan.
Akkasumas, Sumaaleefi Ertiraa keessatii kaampii waraanaa dhaabuufi Saa'ud Arabiyaan waraana Yaman irratti hirmaachuun akka fakkeenyaatti ka'uu ni danda'a jedhu.
Maal kennanii maal fudhachuufi?
Yunivarsiitii Keelitti barsiisaa seeraa fi xiinxalaa siyaasaa kan tahan Awwal Aloon (PhD), ''Biyyooti kuni hariiroon isaan Gaanfa Afrikaatti qabaachaa dhufan siyaas-diinagdeedha,'' jedhu.
Maallaqa warri Yuunaayitid Arab Emireet (UAE) qaban biyyooti Afrikaa baayyeen ni barbaadu, isaan immoo deebiisaa dantaa siyaasaa isaanii eeguu danda'uu irratti xiyyeefatu.
Image copyright Fitsum Aregga
Invastimantiin isaan Jibuutii fi Somaaliyaa irratti taasisaa jiran, rakkoo sharafa alaa furuuf qarshiin isaan dhiyeenya kana Itoophiyaaf kennaniifi biyyoota kaaniif immoo bajata isaaniifaa gargaaraa jiru jedhan.
''Wayita kana kennan tolaan osoo hin taane biyyoota gargaaran irraa deeggarsa barbaadu'' jedhu xiinxalaan kun.
Keessattimmoo yeroo ammaa kana biyyooti Arabaa lamatti qoodamanii jiru; kanneen Iraanin durfamaniifi Saawudii Arabiyaan durfaman.
Jarri kun waraana Yaman irrattii hirmaataniin wal-mormii keessa waan jiraniif, Yuunaayitid Arab Emireet (UAE) immoo biyyi isheen gargaartu Iraanfaa akka hin deeggarreef dhiibbaa uumuu danda'a.
Akkasumas, bu'aa siyaasa kanaan wal-qabatu biraaf illee hariiroo kana uumti Jedhu Dr. Awwal.
Abduraahmaan gama isaaniin hariiroo biyyooti kun taasisan bu'aa yeroo malee faayidaa hin qabu jechuun himu.
Sababiinsaa immoo rakkoon biyyoota kanaa waan isaanumaan furamu malu malee gargaarsaan furmaata waaraa argamsiisuu hin danda'u jedhu.
Mootummaan dantaa ummataa eegsisuu hankaakee yoo abbaa irree tahe humnoota kanaan fayyadamee yeroo aangoosaa dheerafachuu danda'u kan jedhan immoo Dr Awwali.
Badhaasicha duuba dhimmi jiraa?
''Waan gaarii gochaa jirtuu jabaadhaa itti fufaaa kan jedhurra hiika biraa itti hin kennamu'' jedhu xiinxalichi.
Araara biyyoota lamaanii duuba gaheen biyya kanaa jira namoonni jedhan jiraachuu himnee yaada isaaniif gaaffi dhiyyeesineef, araara biyyooti lamaan kan fide jijjiirama Itoophiyaa keessatti amma adeemaa jiru dha.
Otoo jijjiiramni amma dhufe hin uumamne tahee araarri kuni hin bu'uu sababiinsaa wal-dhabdee fi waraanichi kan gaggeessitoota biyyoota lamaanii ture jechuun himu.
Mootummoonni Arabootaa kun akkuma biyya Ameerikaafi warra kaanii shoora harka 5 hin caalle qabaachuu malti malee duuba jirti jechuun hin dandeessisu jedhan jedhan Dr Awwal.
Daldalli Itoophiyaafi Ertiraa gidduutti taasifamu faara qabaa?
Shamarreen isa gudeedamtef ragaa bahuf osoo deemtuu gubamtee duute
Shamarreen laguurra jirtu godoo keessatti duute jennaan soddaan hidhame